MACLUUMAADKA DOG DOG DOG IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Dog Dog Dog iyo Sawiro
Dachshund / Cocker Spaniel ey isku dhafan oo isku dhafan
'Bella waa Docker (Dachshund / Cocker Spaniel mix) markay jiraan 10 bilood. Iyadu waa waxa ugu macaan, laakiin waxay noqon kartaa mid aad u xishood badan oo ku xeeran dadka aysan garanaynin haddii aan guriga joogin. Waxay jeceshahay inay booddo oo dabaasho. Waxay maalin kasta jimicsi ku sameysaa daaradda guriga waxayna u baahan tahay burushka ugu yaraan hal mar usbuucii si ay u ekaato sida ugu fiican! '
Docker ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dachshund iyo Cocker Spaniel . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
'Kani waa eeydayda, Ladybird. Iyadu waa 2 jir, waana isku-darka Dachshund / Cocker Spaniel. Iyadu waa eey aad u jecel oo macaan. Aad ayey u liidataa Waxaan leenahay 4 caruur ah oo iyadu gabi ahaanba way jecel yihiin. Waxay jeceshahay inay la orodo oo ay la ciyaarto, sidoo kale waxay jeceshahay inay raacdo gawaarida. Ladybird waxay jeceshahay xayawaanka kale, laakiin waxay jeceshahay inay baacsato dabagalaha iyo bakaylaha! Waxay na soo ogeysiineysaa goorta ay qasab tahay inay dheri gasho, wayna ogtahay nooca qalabka guryaha ay ku xirnaan karto. Uma beddeli lahayn Ladybird wax adduunka ka mid ah! Iyadu waa eeyga ugu fiican ee aan waligeen leenahay!
Ladybird Dachshund / Cocker Spaniel mix (Docker) oo ku seexanaya sariirta
Ladybird isku darka Dachshund / Cocker Spaniel (Docker) da'da 2 sano
stern bernard labrador iskudhaf retriever
ingiriiska bulldog boston terrier mix puppy
waa maxay adhijir Jarmal ah
Terry sarreenka iyo dhallaanka isku qasan puppy
maxaa goose yar loo yaqaan
buurta bernese muqisho rottweiler isku darka eey